ဒီထက်မက အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီး အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝ ရအောင်ယူမယ် ဆိုတဲ့ မေဦး၊ ဟန်လင်း - Yangon Media Group
Photo – Mr.Haw, Stylist- Ah Ngelay(Red Ribbon), Location – Cafe`s DIBAR)
ဖေဖော်ဝါရီလဟာ အချစ်တွေ နဲ့ ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ လတစ်လဆိုရင် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ ငြင်းပယ်ကြ မည်မဟုတ်ချေ။ နှစ်တစ်နှစ်စပြီဆို ရင် ပြက္ခဒိန်ကိုလှန်ကာ ချစ်သူများ နေ့ဟာ ဘယ်နေ့ကျလဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးရှာဖွေကြည့်တတ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ဒီတစ်ပတ် မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်မြတ်နိုးပြီး၊ ပရိသတ်တွေရဲ့ အား ကျခြင်းခံနေရတဲ့ ဟန်လင်းနဲ့မေဦး တို့ကို Cover Star အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်။
Q. နှစ်ယောက်အကြိုက်တူတဲ့ အချက်….
ဟန်လင်း – အစပ်အများကြီး စားတာပါ။
A. အဓိက ညှိယူရတာ ဘာ တွေဖြစ်မလဲ။
ဟန်လင်း – နားလည်မှုပါပဲ။ သူက အလုပ်အရမ်းများတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်အချိန်မပေး နိုင်တာ ပိုများတယ်။ အဲဒီအတွက် သူ့ကိုပိုပြီးတော့ နားလည်မှုပေးရ တယ်။
မေဦး – အများကြီးပါပဲ။ သူ ကြိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်တာ ရှိသလို၊ မရှိတာလည်း များတယ်။ အရင်က ဆို ခဏခဏရန်ဖြစ်တယ်။ ရန်ဖြစ် သွားပြီးတိုင်းမှာ ညှိလို့မရတာ ဘယ် လိုအဆင်ပြေအောင်နေမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက ပြတ်တော့မယ့်အထိလည်း ဖြစ်ဖူး တယ်။ ချစ်တဲ့သူတွေက ကြားထဲမှာ ပြန်ညှိပေးတယ်။ ရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း ပြန်ပြီးတော့ ညှိယူခဲ့ရတယ်။
Q. ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူ…
ဟန်လင်း – အရာရာတိုင်းက ကျွန်တော့်အတွက် ချစ်စရာကောင်း နေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အချစ်ဆုံးက သူ့ရဲ့ဗိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲ တော့မသိပေမယ့် ကျွန်တော့်အနေ နဲ့ သူ့ရဲ့ဗိုက်ကို အရမ်းချစ်တယ်။
မေဦး – သူက ရိုးသားတယ်။ သူတစ်ပါးအပေါ် ဘယ်တော့မှ အနိုင်မကျင့်ဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း မကောင်းမပြောဘူး။ အလှူအဒါန်း အရမ်းလုပ်ပြီး စိတ်ထားဖြူစင်တယ်။
Q. ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်…
ဟန်လင်း – အရမ်းနားငြီး တယ်။ ပွစိပွစိ အရမ်းလုပ်တယ်။ တကယ်တော့ သူက အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်နေရတဲ့အတွက် တိ ကျချင်တာပါ။
မေဦး – သူက နည်းနည်းဂျစ် ကန်ကန်နိုင်တယ်။ သူများနဲ့ဆို ဘယ်တော့မှ ဂျစ်ကန်ကန်မလုပ် ဘူး။ မေဦး လုံဝမကြိုက်ဘူး။ အခု လည်း မကြိုက်ဘူး။ နောက်လည်း လုံးဝကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒါကနည်းနည်းမေ့လို့ရတဲ့အရာဆို တော့ မေ့ထားရမှာပေါ့။
Q. သူ့ကိုပြင်စေချင်တဲ့အချက် ….
ဟန်လင်း – ဒေါသကြီးတာ လေးလျှော့ပါ။
မေဦး – သူက လူငယ်လည်း ဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာလည်း အငယ်ဆုံး သား။ မေဦးကကျတော့ အကြီးဆုံး။ မေဦးက ငယ်ငယ်ကတည်းက အလုပ်လုပ်တဲ့ Life ကို ရသွားတယ်။ ကိုယ်နေ ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အလုပ်လုပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ အမြဲတမ်းသွက်တယ်။ တစ်ခုခုဆို လည်း စိတ်ပူတတ်တယ်။ သူကကျ တော့ အငယ်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့် တစ်ခုခုဆို တွန်းအားပေးနေရတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင် မှုတွေ၊ အနာဂတ်တွေက ကိုယ်ကိုယ် တိုင်ပြေးနေမှဖြစ်မယ်။
Q. အနာဂတ် Plan က…
ဟန်လင်း – အများကြီးပါပဲ။ ကိုယ်တွေဆွဲထားတဲ့ Plan တွေကို Step by Step သွားဖို့က အရေးကြီး ဆုံးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ထင် တယ်။
မေဦး – သူ့လည်း သူ့အလုပ် တွေနဲ့ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစား မယ်။ မေဦးလည်း ဒီထက်မ က အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမယ်။ နှစ် ယောက်အတူတူ ဘဝမှာအကောင်း ဆုံးတွေ ဖန်တီးမယ်။ အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝကို ရအောင်ယူမယ်။ စံပြအနေနဲ့ ဖြစ်အောင်နေမယ်။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော မေ့နိုင် အောင်ကြိုးစားမယ်။ Positive ဘက်ကနေ တွေးပေးလို့ ရတဲ့အထိ ကြိုးစားသွားမယ်။ ကိုယ်အောင်မြင် အောင် ကြိုးစားပြီးသွားရင် သူများ တွေကို၊ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်သွားဖို့ စီစဉ်ထား တယ်။
Q. ဘယ်အချိန်မှာ လက်ထပ် ဖြစ်မလဲ။
ဟန်လင်း – အစီအစဉ်တော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုပါသေးတယ်။
Q. ကလေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိ လား။
ဟန်လင်း – လိုပါသေးတယ်။ အဓိကက အများကြီးကြိုးစားရဦး မယ်။ သူကတော့ သူ့အလုပ် နဲ့ သူ Stable ဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက် သိပ်ကိစ္စ မရှိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အများ ကြီးကြိုးစား ဖို့လိုသေးတယ်။ ကျွန် တော်လည်း ကျွန်တော့်အနေအ ထားနဲ့ကျွန်တော် Stable ဖြစ်သွား ပြီဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့၊ ကလေး ယူဖို့ကိစ္စတွေ စဉ်းစားသွားမှာပါ။
မေဦး – မေဦးတို့က မင်္ဂလာ ဆောင်ပြီးရင် ကလေးယူမယ်။ မင်္ဂ လာဆောင်ဖို့က သူအလုပ် လုပ်ဦး မယ်။ မေဦးကို သူအမြဲပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ သူအလုပ် လုပ်မယ်။ သူရည် မှန်းချက် တစ်ခုရှိ တယ်။ အဲဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်မှ မေဦးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ်။ ကလေးယူမယ်။
Q. ဝန်းရံတဲ့သူတွေများတဲ့ အပေါ် ဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ဟန်လင်း – ပျော်ပါတယ်။ ချစ်တဲ့သူတွေလည်း များသလို၊ မုန်း တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မုန်းတဲ့သူတွေရော ချစ်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရေးကြီး တဲ့ အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်တယ်၊ မုန်း တယ်ဆိုတာပြောပေး တဲ့အတွက် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ခံစားရတာတွေကို ပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။
မေဦး – မေဦးတို့ကို ချစ်နေတဲ့ အတွက် ဘာလုပ်လုပ်အပြစ်မမြင် ကြဘူး။ အဲဒီချစ်တာတွေ သည် အလကားဖြစ်မသွားအောင် အကောင်းဆုံးနေတယ်။ အမြင်ရိုင်း အောင်မနေဘူး။ ချစ်ဖို့ကောင်း အောင်နေတယ်။ မချစ်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်း အမြင်က တ်အောင် မနေဘူး။ ပိုပြီးဆင်ခြင်ပြီးနေတယ်။ ဝန်းရံတဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူး တင်တယ်။ မချစ်ဘဲ မကောင်း ကြောင်းပြောနေတဲ့သူတွေကိုလည်း မကောင်းမမြင်ဘူး။ အကောင်းမြင် နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်။
Q. 8days Cover ရိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်…
ဟန်လင်း – ပျော်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က နည်းနည်းချေးများတဲ့ သူဖြစ်တာကြောင့် လာကမ်းလှမ်း တိုင်းလည်း သိပ်မရိုက်ဖြစ်ဘူး။ အခု က မှတ်မှတ်ရရလေးလည်းဖြစ် အောင် ရိုက်ဖြစ်တာပါ။
မေဦး – အရမ်းပျော်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ရိုက်ဖို့ပြောတာတွေ ရှိပေမယ့် အခြေအနေအရ ငြင်း ဆန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ လူအများကို ဂရုစိုက်ရတာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ရတာတွေ။ အလုပ်ကို ဂရု စိုက်ရတာတွေ။ သူ့မိသားစု၊ ကိုယ့် မိသားစုကို ဂရုစိုက်ရင်း တချို့အဆင် မပြေတဲ့ဟာလေးတွေကို ငြင်းခဲ့ရ တယ်။ အခုက ဘဝမှာအမှတ်တရ လည်းရှိချင်တာကြောင့် ရိုက်ဖြစ် သွားတာပါ။
အနုပညာသတင်းများ ၊ အင်တာဗျူးရုပ်သံများကို ထပ်မံဖတ်ရှုလိုပါက https://www.facebook.com/celebrities8daysaweekjournal/ မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ခွဲ သုံးနှစ်လောက်ကတည်းက စိတ်ချမ်းသာမှု ရနေပါပြီ ဆိုတဲ့ သန္တာလှိုင်
ပရိသတ်တွေက ကိုယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ဝေဖန်တာကို သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့
ဒဂုံတောင်ရပ်ကွက် အချို့၏ လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ရန်ကုန် ဓာတ်အား ကော်ပိုရေးရှင်
နိုင်ငံတော် သမ္မတ မုံရွာလာစဉ် လက်ပံတောင်းကြေးနီ စီမံကိန်း မြေသိမ်းခံတောင်သူများ ဒေသခံ အခက်??